Hafotaka ny “Festival MAKI” ao Mitsinjo | Région Boeny
Nampahafantatra ny Ben’ny tanànan’ny Mitsinjo sy ny mpandrindra ny fikambanana MMZ (Marambitsy Miaro ny Zavaboahary) ny zoma 10 oktobra lasa teo, fa ho tanterahina ny 7 sy 8 Novambra 2014 ho avy izao ny “Festival MAKI” na ny Festival Mahavavy Kinkony ao amin’ny Distrikan’i Mitsinjo.
Izany no hatao dia mba ho fanatanterahana ny asa nofaritan’ny fikambanana MMZ amin’ny fiaraha-mitantana ny Faritra Arovana vaovao Mahavavy Kinkony izay mivelatra eo amin’ny 302 000 ha eo.
Ny tanjonan’ny hetsika dia hampahafantatra ireo harena voajanahary sy vakoka mampiavaka ny Distrikan’i Mitsinjo izay toerana manankarena ampy ivelomany sy ivelaran’ireo voahary manan’aina ao. Ny iray ampahefatry velaran-taniny dia rakotr’ala maina, manana ny rakotra ala honko hatrany amin’ny 21 750 ha ihany koa izy, ary ankoatr’ireo dia manana tany lonaka sy faritra mando mahatratra 30 000 ha ka tafiditra ao anatin’izany ny farihin’I Kinkony sy ny reniranon’i Mahavavy.
Ankoatra ny lafiny ekolojika sy tontolo iainana, dia manan ny mampiavaka azy eo amin’ny kolontsaina sy fomba amam-panao ihany koa iny faritra Marambitsy iny, izay azo trandrahana ho an’ny fizahan-tany hanatsarana ny toe-karena. Ilaina araka izany ny himasoana ny fikoloana sy fitantanana ireo harena ireo mba haharitra. Isan’ny andraikitra sahanin’ny MMZ ary ny fiarovana ny tombotsoan’ny mponina eny ifotony sy miantoka ny fahatsaran’ny fitantanana sy ny fampiasana ireo vokatra voajanahary voatanisa ireo.
Maro ny hetsika hanamarihana ny Festival MAKI, tafiditra ao ny fanatanjahanatena nentin-drazana sy vahiny toy ny morengy, ny tolon’omby, ary ny ady baolina kitra. Manentana ny manampahefana sy ny olon-tsotra ny MMZ mba hanohana izany hetsika izany.